Barashada Jarmalka Jarmalka
Sida ugu wanaagsan ee luuqad loo barto ayaa ah in la barto halka looga hadlo oo ah luqad hooyo. Si kale haddii loo dhigo, waa doorashada ugu fiican ee dadku ku bartaan Jarmalka Jarmalka haddii ay fursad u helaan.
Dabcan, waxaad kuheleysaa waxbarasho wanaagsan, waxbarashada luuqada qalaad ee turkiga oo ka dhex muuqaneysa meheraddaada, laakiin sida aad ugu nooshahay arrinta dadka ku hadla afkooda hooyo oo aad uhelayso waxbarashadaadu waxay umuuqan doontaa. Sababtaas awgeed, waa waxtar in aad si taxaddar leh uga fikirto inta aad xulanayso. Kuwa doonaya inay Jarmalka ku bartaan Jarmalka waxay iska qoraan iskuulada bixiya barashada luqadaha gaarka loo leeyahay inta xaaladdu ku habboon tahay. Si kastaba ha noqotee, taas ka sokow, waxaan aragnaa in kuwa doonaya inay bartaan Jarmalka Jarmalka ay u qaybsan yihiin laba.
In kasta oo kooxa labadan koox ay ku jiraan dad ku guuleystay oo wax ku bartay barnaamijka qalin jabinta Jarmalka, kooxda labaadna waa kuwa doonaya inay codsadaan barnaamijka mastarka oo qorsheynaya inay horay isu diyaariyaan. Haddii aan u baahanahay inaan si gaar ah u baarno labadan koox, waxaan dhihi karnaa waxyaabaha soo socda.
Ardayda wax ku barata Jarmalka
Ardaydani waa dadka ku guuleystey barnaamij kasta oo tacliin sare ah Jarmalka oo u yimid inay waxbartaan. In kasta oo waxbarashadoodu sii socoto, waxay sidoo kale isku dayaan inay bartaan Jarmalka. Waxaa la arkaa in dadka yimid Jarmalka adoo aqbalaya jago shaqo isla markaana isku dayaya inay bartaan Jarmalka intaanay soo galin kooxdan. Dadkani waa inay iska diiwaangeliyaan iskuul luuqad gaar loo leeyahay oo ay ku helaan waxbarashada Jarmalka ee goobta ay u baahan yihiin. Waxaad ku heli kartaa macluumaad adoo dib u eegay qormooyinkeenna kale ee ku saabsan xilliyada tababarka iyo khidmadaha ugu dhow.
Ardayda Doonta inay wax ku bartaan Jarmalka
Ardayda ku jirta kooxdan ayaa ah kuwa doonaya inay iska qoraan barnaamijka tacliinta sare ama barnaamij jaamacadeed gudaha Jarmalka. Sababtaas awgeed, waa wax dabiici ah inay rabaan inay bartaan Jarmalka horay u sii diyaar garoobaan. Sidoo kale, haddii aad iska diiwaangeliso barnaamijka tacliinta sare ee Ingiriisiga ee Jarmalka, waa inaad lacag badan bixisaa sanadkiiba. Laakiin haddii aad ku hesho waxbarasho luqadeed lacag ka yar ka dibna aad bilowdo inaad wax ka barato jaamacad ku hadasha luqadda Jarmalka, waxaad ka faa'iideysan kartaa xaqa aad u leedahay inaad hesho waxbarasho bilaash ah.